MUJIGAE မုန်တိုင်းငယ်အဖြစ်သို့ရောက်ရှိ | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
September 10, 2009 — mmweather
လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း MUJIGAE မှ အပူပိုင်းမုန်တိုင်းငယ် MUJIGAE အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိလာပြီး ဟိုင်နန်ကျွန်းနှင့် ဂွမ်ဒုံးပြည်နယ်အနောက်ပိုင်းဒေသများသို့ ခြိမ်းခြောက်လာလျှက်ရှိကြောင်း T2K နောက်ဆုံးသတင်း update တစ်ခုတွင်ဖေါ်ပြပါရှိပါသည်။
တိုင်းထွာမှုများမှာ ပြောင်းလဲမှုမရှိသေးပဲ နောက် ၂၄ နာရီအတွင်း အနောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားနေဦးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မနက်ဖန် စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက် မနက်ပိုင်း(ဟိုင်နန် ဒေသအချိန်)တွင် ဟိုင်နန်ကျွန်းကို ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ပြီး စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ဗီယက်နမ်ပင်လယ်ကွေ့ TONKIN သို့ ရောက်ရှိကာ နောက်တစ်ရက် စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဖြစ် ပြန်လည်အားပျော့ကာ ပျက်ပျယ်သွားနိုင်ဘွယ်ရှိကြောင်း ခန့်မှန်းတိုင်းထွာချက်များအရ သိရှိရပါသည်။
Effects: MUJIGAE’s compact and partially-exposed circulation remains at sea but its western rainbands has begun to spread across the coastal areas of Hainan and Western Guangdong. Deteriorating tropical storm conditions can be expected later tonight as the system moves ashore. 1-day rainfall accumulations of 200 up to 300 mm can be expected along MUJIGAE’s rainbands.
Posted in Weather Alert, Weather News. Tags: MUJIGAE, tropical-storm, weather. LeaveaComment »
« လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 14W MUJIGAE
MUJIGAE လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဖြစ်ပြန်လည်လျော့ကျသွားပြီ »